Umbhali nencwadi ngomlando we-Afrika | Isolezwe
Umbhali nencwadi ngomlando we-Afrika
Izindaba / 17 January 2019, 4:07pm / PHILI MJOLI
UMBHALI wencwadi yezingane ekhuluma ngomlando we-Afrika, i-In Africa with Avi and Kumbi, uSolwazi Nomalanga Mkhize nendodakazi yakhe uLindiwe Isithombe: SITHUNYELWE
UKUHLUPHEKELA izincwadi zezingane ezibhale ngomlando wama-Afrika kuholele ekutheni abhale eyakhe incwadi enothe ngomlando wase-Afrika.
USolwazi Nomalanga Mkhize, obuye abe ngusomlando, uthe njengomama ojwayele ukuthenga izincwadi ubone ukuthi zincane izincwadi zezingane ezikhuluma ngomlando wase-Afrika, nezikhona akulula ukuzithola ezitolo ezijwayelekile zezicwadi.
“Ngiqaphele ukuthi izincwadi zezingane ezikhuluma ngomlando wabantu abamnyama aziziningi, uma sekukhulunywa ngezibhalwe ngezilimi zabantu abamnyama kuba nzima kakhulu. Izincwadi zomlando zezingane ebengizithola bezikhuluma ngomlando waseGibhithe. Ngabona ukuthi kumele ngenze okuthize ngalokhu,” kusho yena.
Le ntokazi eke yaba ngumethuli wohlelo olukhombisa izivakashi ezikhonze ukubuka imvelo ukuthi yiziphi izindawo ezinothe ngemvelo e-Afrika, abangazivakashela, iShoreline ebidlala kuSABC3 usanda kwethula ngokusemthethweni incwadi yomlando yezingane, i-In Africa with Avi and Kumbi.
Le ncwadi ikhuluma ngomlando we-Afrika ngezikhathi zasemandulo ize ifike lapho amazwe ase-Afrika ethola inkululeko. Le ncwadi ekhishwe yinkampani yakhe, iKhize waZambezi, ikhuluma ngezikhathi ezibalulekile zomlando ezifana nobuciko bamatshe obenziwa e-Afrika, ukufika kwempucuko kula mazwe, izindlela zokuhweba ezazisetshenziswa phambilini ,ubugqila, ukuthi kwakwenzekani ngesikhathi amanzwe amaningi ase-Afrika esengaphansi kwamakoloni, izikhathi zobunzima amazwe ase-Afrika adlule kuzo ngaphambi kokuthi kutholakale inkululeko.
USolwazi Mkhize uthe ukushicilela incwadi kumthathe iminyaka emithathu ngenxa yokushoda kwabaxhasi. Enye ingcindezi abenayo ukuthi ubengenaso isikhathi esanele sokubhala ngoba ubeqala ukuba ngumama ngendodakazi yakhe uLindiwe.
“Ngike ngaya enkampanini eshicilela izincwadi ngiyodayisa ngombono wami mayelana nale ncwadi, kwaba sengathi bayangemukela, futhi bayabona ukuthi ngeke balahlekelwe uma bengayishicilela kodwa babuye bangabe besakhombisa uqgqozi lokwenza lokhu. Bengizitshelile ukuthi le ncwadi kumele ngiyibhale ngeke ngidikibaliswe imibono yabantu ngayo. Ngenxa yogqozi ebenginalo kudingeke ngibe ngiqala ngibhala yize bengingazi ukuthi imali yokukhipha lo msebenzi ngizoyithola kuphi. Ngithe ngiphakathi nayo ngathola inkampani ebifuna ukubuyisela emphakathini ngokuxhasa izinhlelo zomphakathi yabona kungumbono omuhle ukuthi ingixhase ukuze ngishicilele incwadi yami, ezofundwa yizingane eziphuma emphakathini,” kusho yena.
USolwazi Mkhize kule ncwadi ubambisene nomdwebi uSani Singaphi obedweba izithombe ezihambisana nezindaba ezibhalwe kule ncwadi.
“Izithombe zibaluleke kakhulu encwadini, bengifuna izithombe ezinhle ezikhangayo, ezihlekisayo, ezehlukile futhi ezikhombisa ubu-Afrika. Ukusebenzisana naye kunginikeze lokho ebengikufuna,” kusho yena.
Uthe le ncwadi izofundwa izingane nabantu abathanda ukufunda ngomlando wezwekazi i-Afrika.